Amin Arts oo Sawir Qosol Badan kasameeyay Qaar kamid ah Musharixiinta Madaxweyne oo shiidsan (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Xili Maanta ay ku egtahay Qabashada Araajida Musharixiinta Madaxatinimo ee Soomaaliya ayaa soo baxaya in ay jirana qaar kamid ah Musharixiinta Madaxweynanimo oon awoodin bixintii lacag dhan 10-kun oo Dollar oo Diiwaan galinta Musharaxnimo ah.
Musharixiinta qaar ayaa Magaalada la yimid lacago aan badneen kuwaa oo looga dhameeyay intii ay Magaalada joogeen buun buunin iyo xayeesiin iyo kirada Hotelada iyo gawaarida lagu waday ,waaguna ku baryay markii Shuruud looga dhigau bixinta lacag dhan 10-kun Dollar oo Diwaan galin ah.
Qaar kamid ah Musharixiintii tirada badnaa ayaa iska tanaasulay halka kuwa kalana ay si hoose uga dhuunteen Magalada kadib markii ay waayeen lacago an isku diwaan galiyaan iska dhaafee lacago ay Baarlamaanka ku kasbadaan.
Amin Ats oo ah kaartooniste caan ah ayaa soo sawiray qaar kamid ah Musharixiinta oo Beesha Calamka ka dalbanaya lacagta la hordhigay aysan heesan taa oo dad badan ka qoslisay hamiga haya raga aan lacagta heesan ee doonaya in ay la tartamaan raga malaayiin Dollar oo lacag ah heesta.
Qaar kamid ah Musharixiinta ayaa dalalkii ay ka yimaadeen asxaabtoodii ku sugneed ka dalbaday in iyana lacago deyn ah usoo diraan ay dib ka siiyaan ama Wasiir ugu badali doonaan.